IGUMBI LOKUBHELELA LAQINISO EGUMBINI LEZEMIDLALO LE-CHATEAU
Vouvray, Centre, i-France
Igumbi e-i-bed and breakfast ibungazwe ngu-Stéphane
U-Stéphane uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-95% wezivakashi zakamuva.
U-95% wezivakashi zakamuva unikeze u-Stéphane izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Emasangweni e-TOURS kanye neChâteaux enkulu yaseTouraine, Igumbi elikhulu elinikezwe uLouis Ph, uHenri II, isitayela sikaLouis XIV, elinethezekile e-Château, elinegumbi lokugezela elikhulu ne-wc, ukubukwa okuhle kwepaki kanye nengadi ye-French Renaissance kanye ne-rose garden.
Ukwabelana nezivakashi zethu ngokuhambisana nezimo zokuhlanzeka kwe-COVID: igumbi lebhilidi, ithenisi, indawo yokubhukuda yangaphandle (ehlobo) - indawo yokubhukuda yasendlini egumbini elingaphansi elishiswe ngo-28 °, ihholo lezemidlalo & nesauna, ingadi yamarose kanye nengadi yokuvuselela,
Amakamelo ethu ezivakashi angu-5 azokujabulisa ngokuhlobisa kwawo, ukunethezeka nokuthula. I-mini-bar yesayithi, isomisi sezinwele, imikhiqizo yokwamukela (ama-shampoos, insipho njll.)
Ukudla kwasekuseni kungokuzithandela futhi kumelela isithasiselo sama-Euro ayi-15 ngomuntu ngamunye.
Ukwabelana nezivakashi zethu ngokuhambisana nezimo zokuhlanzeka kwe-COVID: igumbi lebhilidi, ithenisi, indawo yokubhukuda yangaphandle (e…
4.77(43 okushiwo abanye)
4.77 (izibuyekezo ezingu-43)
Phakathi kwehlathi nezivini zaseVouvray, kanye ne-15 km kuphela ukusuka e-Tours, thola impilo ye-Château.
Ngesikhathi sokuhlala kwakho, sizokukhombisa eduze kweChâteau yethu futhi sikubonise ingcebo yesigodi saseLoire
Hlola ezinye izinketho ezise- Vouvray namaphethelo